Recycle2(သိုးမွှေးအသုံးဝင်ပုံဗဟုသုတ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » Recycle2(သိုးမွှေးအသုံးဝင်ပုံဗဟုသုတ)
Recycle2(သိုးမွှေးအသုံးဝင်ပုံဗဟုသုတ)
Posted by koaung on Nov 21, 2011 in Photography, Travel | 12 comments
ဒီတခါတော့ အနောက်နိုင်ငံများနဲ့ဥရောပနိုင်ငံများမှာရီဆိုင်ကယ် အဖြစ်အသုံးများတဲ့သိုးမွှေး အကြောင်းကိုကျနော်သိတာလေးဝေမျှချင်ပါတယ်
ကျနော် ခရီးသွားလို့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ဥရောပရောက်တိုင်း သူတို့ဆီကအသုံးပြုတဲ့ ခြုံစောင်တွေဟာ အမ်မတန်မှပေါ့ပါးပြီး အနွေးဓတ်လဲတော်တော်လေး ကာကွယ်ပေးပါတယ် ဒါနဲ့နယူဇီလန်ကိုရောက်တုံး သိုမွှေးစောင်စက်ရုံကိုရောက်ခဲ့ပါတယ် အဲဒီမှာ သိုးမွှေးစောင်ချုဎ်လုဎ်ပုံနဲ့ သိုးမွှေးအသုံးပြုပုံနဲ့ အခြားအသုံးပြုပုံများကိုပါ လေ့လာသိရှိခဲ့ရပါတယ် သူတို့နိုင်ငံတွေမှာသိုးတွေပေါသလို သိုးတကောင်ကို နှစ်လနဲ့သုံးလတခါ အမွှေးများရိတ်ပေးရပါတယ် ရပြီလာတဲ့သိုးမွှေးများကိုစင်ကြယ်သန့်စင်ပြီး အသန့်စင်ဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားတွေကိုတော့ စောင်အဖြစ်အသုံးပြုပြီး ကျန်တဲ့အပိုင်းအစတွေကိုတော့ ဆောက်လုဎ်ရေးမှာ အသုံးပြုကြောင်း သိရှိရပါတယ် ဆောက်လုဎ်ရေးမှာအသုံးပြုပုံကတော့ အိမ်တွေရဲ့အမိုးအကာများမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုချင်းပါဘဲ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ အအေးဒဏ်ခံနိုင်အောင်ဘဲဖြစ်ပါတယ် နောက်တခုသိုးမွှေးရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ သိုးမွှေးဟာအလွယ်တကူ မီမလောင်ခြင်းပါ
စောင်စက်ရုံကိုရောက်တော့ စောင်စက်ရုံကအလုဎ်သမားများဟာ အာရှနွယ်ဖွားများဖြစ်ကြောင်းလဲတွေ့ ခဲ့ရပါတယ် စောင်ရဲ့ဈေးနှုန်း ကတော့နှစ်ယောက်အိပ် စောင်တထည် ကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၀ပါ ဈေးပေါတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် နိုင်ငံခြားကိုပို့ပြီး ကုန်တိုက်တွေပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ အနဲဆုံးဒေါ်လာ ၁၂၀ကနေ၁၅၀ထိအောင်ရောင်းကြပါတယ် မိတ်အင်ချိုင်းနား ထက်လဲ စိတ်ချရတာမို့ ကျနော်လဲအပြန်မှာ ၂ထည်ဝယ်ခဲ့ပါတယ် ကျန်တဲ့ကြမ်းခင်းအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ အခင်းများလဲရောင်းပေမဲ့ အပေအရေလွယ်တာမို့ စိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး ရွာသူရွာသားများအား အစဉ်လေးစားလျှက်
အောက်ဆုံးကပုံကတော့ နယူဇီလန်ဟော်တယ်က စတာတ် ဖြစ်ပါတယ်(သူတို့ဆီကအစားအသောက်များ ကအဲဒီအသားကလွဲလို့ မြန်မာအစားအသောက် ကိုမမှီ စားလို့မကောင်းပါကြောင်း)
မြန်မာငွေနဲ့ တွက်ရင် စောင်တွေဈေးကြီးသလိုပဲနော့်…
အင်းလေ..တားတို့ ကလဲ အရီးလေးဖွားပိန်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ အညာစောင်လေးပဲခြုံဖူးတော့.
ဗဟုနဲ့ သုတတော့ ရပါတယ် ဆာအောင်ရေ
သတိထားမိသလောက် နယူးဇီလန်က နို့မှုန့်လည်း အများကြီး အိပ်စပို့ လုပ်တယ်နော်။ သိုးတွေကိုလည်း စီးပွားဖြစ် မွေးတယ်ဆိုတော့ (စက်မှုနိုင်ငံလို့ ထင်ထားတာ) မွေးမြူရေး တော်တော်လုပ်ပုံပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဆီကထွက်ကုန်ကို ကုန်ချောလုပ်ပြီးမှ အိပ်စပို့ လုပ်တာကိုတော့ အတုယူရမယ်။
ဟုတ်တယ်မမရေ နယူဇီလန်က နို့ထွက်ပ္ပစည်း နဲ့ အမဲသားက နာမည်ကြီးပါ တခါတလေအမေရိကန် တို့ဂျပန်တို့ကလာတဲ့ အမဲသားတွေ
ရောဂါဖြစ်လို့မစားရဲရင်နူဇီလန်ကလာတဲ့အမဲသားကိုဝယ်စားရပါတယ် နောက်ပြီးသိုးကပြုလုဎ်တဲ့အသားအရေလိမ်းဆီကလဲ ကောင်းသလိုဈေးလဲကြီးတယ်ဘူးသေး (၂၅၀စီစီ ၆လုံးကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ၁၈ဒေါ်လာပါ) ဆေးဝါးတွေလဲထုက်လုဎ်တာတွေ့ရတယ် အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးများ အထူးမက်မောလှတဲ့ အလှဆီဟာဥရောပမှာသာ ဈေးအပေါဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးလို့သတိထားမိပါကြောင်း (ဇနီးဝယ်နေတာ သတိထားမိလို့) စပိန်၊ဪစတေးရီးရား၊ချက်ကို၊ဂျာမနီ တွေမှာတော့ပေါတယ် ဥပမာ ဂျပန်ကဆပ်ပြာမွှေး နဲ့ စပိန်ကဆပ်ပြာမွှေး ဈေးချင်းတူရင်တောင် စပိန်ကဆပ်ပြာက ၃ဆကြာအောင် အသုံး ခံကြောင်း သုံးနေလို့သတိထားမိပါကြောင်း
ကိုယ်တိုင်မသွားပဲ ရွာထဲကနေ လည်ရအောင် နယူးဇီလန်သွား တောလားလေးလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် တင်ပါလား။ ရွာသူရွာသားတွေကို ဒေသန္တရဗဟုသုတလည်း ဖြန့်ဝေပေးရာကျတာပေ့ါ။
ပုံထဲက အကောင်တွေ က နယူဇီလန်သိုးတွေလား
မြန်မာပြည်ကသိုး နဲ . မတူဘူးနော်
အနောက်ကချိတ်ထားတဲ့ကော်ဇောတွေက အဲဒီအကောင်လေးတွေရဲ့အရေခွံတွေနဲ့ချုက်ထားတာဖြစ်ပြီး သူကပိုဈေးကြီးပါတယ် သိုးကလဲအမျိုးအစားတော်တော်များများရှိပါတယ် အရင်ပိုစ ကိုလဲ လေ့လာလို့ရအောင် တွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကိုထာဝရ ခင်ဗျား
ဒေါ်လာ ၈၀ ဆိုတော့ ကျပ် ၆၄၀၀၀ ပေါ့နော်။ ဈေးကြီးလိုက်တာ။ သိပ်တော့မပေါဘူး။ ဒီဇိုင်းလေးတွေတော့ မိုက်တယ်။ တော်တော်လဲနွေးမဲ့ပုံ။ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ တော့တန်မယ် ထင်တယ်နော် ကိုအောင်။
ကိုထာဝရရေ အဲဒီအကောင်လေးတွေက အနောက်ကနံရံမှာချိတ်ထားတဲ့ကော်ဇောတွေကိုသူတို့ရဲ့အရေခွံနဲ့လုဎ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် အကောင်သေးပေမဲ့ ဈေးကမသေးဘူးဗျ သိုးအမျိုးအစားကလည်း၁၀မျိုးခန့်ရှိတယ် ဪစီမှာတုံးကပြပွဲမှာ ပြောပါတယ် ကြုံတုံးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ အရင်ကမြန်မာစာ မသုံးတတ်လို့ ဆောရီးပါဗျိုး
ကိုအီးတီရေအဲဒါစက်ရုံဈေးနော် မိဒ်အင်ချိင်းနား နဲ့ဒေါ့ ရှင်လို့မရဘူးပေါ့ သုံးလို့ကတော့ ကောင်းပါတယ်
သိုးပုံလေးတွေက တမျိုးပဲနော် … နောက်ပြီး အမွှေးလည်း ပိုထူ … နည်းနည်းလည်း ပိုထွားသလိုပဲ ။
သိုးအကောင်သေးလေးများကပိုဈေးကြီးပါတယ် စောင်ကတော့ စက်ရုံဈေးပါ သိုးအမျိုးပေါင်း၁၀မျိုးကျော်ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်
အရင်ကတင်ဘူးတဲ့ ထဲမှာ ကြုံလို့ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ကြုံရင်နောက်တခါခရီးသွားပိုစ တင်တိုင်းမြန်မာစာနဲ့ ရှင်းလင်းအောင်ကျိုးစားပါ့မယ် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လျှက်
ကိုအောင်ပြောတာ မှတ်ထားလိုက်ပီ ဗျို့ 
ကျုပ် အိမ်ဆောက်တဲ့အခါ ကြ သိုးမွှေးထည့်ဆောက်မယ် ဗျာ